ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု 30 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကဘဝတစ်ခု 29
ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ လူနှင့် တိရိစ္ဆာန် နှိုင်းယှဉ်၍ မပြောရာ →
ဆရာမြတ်ကြီးသည် စာရေးသူတို့ တပည့်သားသမီးများ ကို တန်ခိုးကြီးဘုရားတော်တော်များများ ပို့ခဲ့ဖူးပါသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် မင်းဘူးရွှေစက်တော်၊ ပြည်ရွှေဆံတော်၊ မကွေးမြသလွန်၊ ယခု ကျိုက္ခမီရေလည်ဘုရား၊ ရွှေတိဂုံ၊ ကျိုက်ထီးရိုး၊ စစ်ကိုင်းတော်ဘုရားများအပါအ၀င်၊ တန်ခိုးကြီးဘုရားများ၊ နာမည်ကြီးဒေသ တော်တော်များများကို ဆရာမြတ်ကြီးက ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။
ဆရာမြတ်ကြီးသည် အမျှော်အမြင် လွန်စွာ ကြီးမားတော်မူရာ စာရေးသူတို့နောင်အနာဂတ်၊ စာရေးသူအဖို့တော့ ယခုထက်တိုင်ပေါ့ . . . အကျိုးရှိစေသော ဌာနများကို အသေအချာရည်ရွယ်၍ အပင်ပန်းခံကာ ပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူတို့သည် ဆရာမြတ်ကြီး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို အထူးဆပ်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင် ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။ ဆရာမြတ်ကြီးသည် အာရုံကောင်းသဖြင့် အာရုံကောင်းသော တန်ခိုးကြီးဘုရားများ နေရာ တော်တော်များများ ကို အပင်ပန်းခံ၍ ပို့ခဲ့ဖူးရာ ဂူအနေဖြင့် ပြင်ဦးလွင် ခိုနန်းရေယာဉ်ဂူ၊ ဓမ္မသိဒ္ဓိလှိုဏ်ဂူ၊ ရေတံခွန်စသော နေရာအမျိုးမျိုးကိုလည်း ပို့ခဲ့ပါသည်။ ဓမ္မသိဒ္ဓိလှိုဏ်ဂူတော်မြတ် အကြောင်းကို နောင်အလျဉ်းသင့်သောအခါ အသေးစိတ်တင်ပြပါဦးမည်။
ဓမ္မသိဒ္ဓိဆိုသည်မှာ ဆရာမြတ်ကြီး တရားအောင်မြင်သဖြင့် ပေးခဲ့သော နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သားစဉ်မြေးဆက် ဆက်လက်၍ ထိုဂူကို စောင့်ရှောက်ရာ ယခုအခါ ဆရာမြတ်ကြီး တည်ထားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မသိဒ္ဓိ စေတီတော်မြတ်အား ဆက်လက်၍ မွမ်းမံ ခြယ်သ စောင့်ရှောက်ပြုပြင် တိုးချဲ့မှုများကို တပည့်သားသမီးများ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်း၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆရာမြတ်ကြီးသည် ဘာသာ၊ သာသနာတော်မြတ်ကိုသာလျှင် အထူးအရေးပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာမြတ်ကြီးသည် သာသနာ့ အာဇာနည်များကို ရွေးချယ်လျှင် သာသနာတော်အတွက် ဇောက်ချခြင်း၊ ဘ၀ပေးခြင်း၊ တရားတော်မြတ်အတွက် တိဟိတ်ပီပီ တစ်သက်တာလုံးကျင့်ကြံပါမည် ဟူသော အဓိဌာန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း စသောဂုဏ်ရည်များကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
စာရေးသူအနေနှင့် ပြောရလျှင် သာသနာ့ အာဇာနည်ဖြစ်လိုလျှင် အနည်းဆုံး ဆရာမြတ်ကြီး၏ သွန်သင်ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်း ကျင့်ကြံသော၊ စာရေးသူတို့လို အဆင့်မျိုးကို အနည်းဆုံး ကျော်လွှားဖြတ်သန်းနိုင်မှသာလျှင် ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု စာရေးသူတို့ဘက်မှ သဘောရပါသည်။ ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို တရားအတွက်ပေးဆပ်ခြင်း၊ ထို့နောက်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက် ပေးဆပ်လှူဒါန်းခြင်း စသော ဇောက်ချမှု၊ ပုံအောမှုများကို ပြုလုပ်ပြီှးမှသာလျှင် မိမိတို့အနေနှင့် သာသနာ့အာဇာနည်များ အဖြစ် မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်း အဆိုအဆုံးမရပါသည်။
တခြားသာသနာ့အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်များက တခြားအာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ဂုဏ်ရည်နှင့် ပြည့်စုံကြပါလိမ့်မည်။ စာရေးသူတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့မူ ဘ၀ကိုတရားအတွက် ဇောက်ချခြင်း၊ သာသနာကို ပေးလှူခြင်းစသော အခြေခံကျင့်စဉ်များကို ကျော်လွန်ပြီးမှသာလျှင် ရနိုင်သည်ဖြစ်၍ စာရေးသူအနေနှင့် သုံးသပ်ပြရလျှင် အနည်းဆုံး စာရေးသူ၏ အဆင့်သာသာရှိမှသာလျှင် မျှော်မှန်းနိုင်ကြောင်း ကောင်းစွာ သတင်းရရှိပါသည်။ သာသနာ့အာဇာနည်တို့သည် အရိယာဖြစ်လျှင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန်၊ တံခွန်နှင့် ကုက္ကား အထူးပြောဖွယ်ရာမရှိ၊ ၀မ်းသာဖွယ်ရာကောင်းကြောင်း မှတ်တမ်းပြုလိုပါသည်။
This entry was posted in Buddhism and tagged ဆရာမြတ်ကြီး. Bookmark the permalink.